Wzọ 5 Iji Jiri Ntị Na-elekọta Mmadụ Mee Ka Usoro Ọdịmma Gị Dịkwuo Mma | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 7, 2021 Fraịde, Machị 12, 2021 Ọnye na -bụ Aleh Barysevich?
Ọdịnaya bụ eze - ndị ahịa ọ bụla maara nke ahụ.
Agbanyeghị, oge ụfọdụ, ndị na - ere ahịa ọdịnaya enweghị ike ịdabere na nka na nka ha - ha kwesiri itinye usoro ndị ọzọ na atụmatụ azụmaahịa ha iji mee ka ọ dị ike. Ige ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya meziwanye usoro gị ma nyere gị aka ịgwa ndị ahịa okwu ozugbo n’asụsụ ha.
Dịka onye na-azụ ahịa ọdịnaya, ikekwe ị maara na atụmatụ abụọ akọwapụtara otu ezigbo ọdịnaya:
Ọdịnaya kwesịrị ịgwa ndị na-ege gị ntị okwu, yabụ zaa ajụjụ ha ma dozie nsogbu. Iji mepụta ọdịnaya dị ka nke a, ị ga-achọ ịma ihe nsogbu ndị a bụ. Chọrọ ọtụtụ ozi gbasara ndị ahịa gị na atụmanya, ọchịchọ ha na mkpa ha.
Ọdịnaya kwesịrị ikwekọ na usoro ndị dị ugbu a. Ọdịnaya ị mepụtara kwesịrị ịdị ọhụrụ ma dịkwa mkpa, na-aza ajụjụ dị ugbu a. N’ụwa Intanet anyị juru ebe niile, o nweghị onye chọrọ ịnụ gbasara ihe ndị mere ọnwa ole na ole.
Ọ bụrụ n ’ịgbaso iwu abụọ a, ị ga - enweta ọdịnaya na - eweta ihe na - eweta. Mana kedụ otu ị ga - esi jide n'aka na ọdịnaya gị metụtara ndị ahịa gị ma kwekọọ na usoro a?
Ige nti bụ azịza ya! Ntị mmadụ na-aza na isi nsogbu abụọ a kpọtụrụ aha n'elu: ọ na-enye gị ohere nyochaa ndị na-ege gị ntị na echiche ha banyere akara gị yana usoro ntanetị kacha ewu ewu. Kwesighi ịkọwa ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ ịgụ ma ọ bụ lelee - ị nwere data siri ike na-egosi gị nke ahụ.
Eleghị anya ị ga-elekọtarịrị SEO ma SEOaa ntị na stats peeji iji nyochaa arụmọrụ ọdịnaya gị. Agbanyeghị, naanị ige ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike igosi gị isi ihe mgbu nke ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya yana ọbụlagodi ahịrịokwu ha ji akọwa isi ihe mgbu ndị a. Ọ na - etinye gị n'ọnọdụ ha n'ebughị mgbalị gị.
Ige nti mmadu bu ogwu ogwu zuru oke megide ihe okike. Amaghi ihe aga ekwu maka na blog ohuru ma obu vidiyo gi? Lelee nchịkọta mmadụ na-ege ntị na nyocha ma ọ na-enye gị ọtụtụ echiche ọhụrụ!
Enwere ihe karịrị otu ụzọ iji iji mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka okike ọdịnaya, na n'isiokwu a, anyị ga-ekpuchi ndị kachasị ewu ewu.
Agbanyeghị, tupu anyị ekpuchi ndụmọdụ na etu esi eme ya, ka anyị tụlee nkenke ịge ntị gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ige ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ usoro nke ịnakọta na nyocha data ịntanetị maka nghọta ngwaahịa na ahịa. Enwere ike inweta data a site na mgbasa ozi mgbasa ozi, ebe nrụọrụ weebụ akụkọ, forums, blọọgụ, ndị nchịkọta nchịkọta na weebụ.
E nwere ọtụtụ ụzọ iji mejuputa ngwaọrụ ndị na-ege ntị na-ege ntị ma na ọdịnaya e kere eke na usoro ịre ahịa n'ozuzu. Nwere ike nyochaa ndị na-eme ihe ike, ndị asọmpi, usoro ugbu a, soro ahụike gị, chọta ndu ọkụ, chọpụta ohere backlinking, jikwaa aha njirimara gị, na ndị ọzọ.
Ngwaọrụ ị na-ege ntị na-achịkọta data dabere na isiokwu ị nyere - ọ na-achọ isiokwu ndị a na mgbasa ozi mgbasa ozi, isiokwu, na ozi nzukọ ma nyochaa ha na ndị dere ha. Ọ bụrụ n'ịchọrọ inyocha aha gị ma ọ bụ mmata aha gị, ị tinyere aha aha gị dị ka isiokwu. Ọ bụrụ n'ịchọrọ inyocha ndị asọmpi gị, ị tinyere aha aha ha na aha ngwaahịa ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inyocha ndị na-ege gị ntị, ị na-etinye isiokwu metụtara niche metụtara. Echiche ahụ doro anya.
Ige ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe gị na - enye gị nghọta dị iche iche gbasara igwe mmadụ na omume ya. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmụ:
Ebe ndi gi (ma obu ndi ozo gi) choro ibi ndu
Kedu asụsụ ha na-asụ
Otú obi dị ha n’otu isiokwu
Kedu isiokwu ndị metụtara ha kachasị atụle
Ihu ọma, ị na-enweta ngwụcha ngwụcha gbasara ndị ịchọrọ ịgbanwe n'ime ndị ahịa gị. Ma dị ka ị maara, ozi bụ ike. Ugbu a anyị matara ihe bụ ige ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ka anyị gafee ụzọ ise dị iche iche iji ịge ntị gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe gị.
1. Jiri Nlekọta Nlekọta Anya Iji Ghọta Ndị Na-ege Gị Ntị Ka Mma
Dịka m kwuru n’elu, ige ntị n’etiti mmadụ na ibe ya nwere ike inye gị nghọta dị mkpa gbasara ndị na - ege gị ntị - omume ha, omume ha, ịntanetị, ihe ndị na-adịghị amasị ha, wdg. Ihe niile ị ga - eme bụ ịhọrọ isiokwu dị mma iji kpokọta data ịchọrọ.
Ka anyị kwuo na ị bụ akara mmiri ara ehi sitere na osisi, ndị na-ege gị ntị gụnyere ndị na-eri anụ na ndị nwere lactose inlerance. Yabụ, isiokwu ndị ị kwesịrị iji bụ vegan, osisi dabeere, lactose inlerant, na ụfọdụ ndị ọzọ na-anaghị agbatị na ngwaahịa gị mana ka bara uru dị ka enweghị obi ọjọọ, ndụ ndụ ndụ, gburugburu ebe obibi-enyi na enyi, wdg
Nseta ihuenyo si na Awario ngwa ige nti.
Ndụmọdụ dị ọkụ: Ebe ọ bụ na ngwa ige ntị na-elekọta mmadụ na-achọ isiokwu ziri ezi ị tinyere, jide n'aka na ị gbakwunye ọdịiche dị iche iche.
Ngwaọrụ ị na-ege ntị na-elekọta mmadụ dị ka Awario ma ọ bụ Talkwalker na-anakọta ma nyochaa ezigbo oge na akụkọ ihe mere eme n'otu oge. Yabụ, ị nwere ike ịhụ nghọta mmadụ na omume ya ozugbo. You nwere ike ịhụ ihe ndị mmadụ na-ekwu maka veganism na lactose-ekweghị ibe nọrọ na ntanetị, mmebi nwoke na nwanyị, mba ndị ha si bịa, otu ha si eche banyere isiokwu ndị ahụ, ebe weebụsaịtị na netwọkụ mgbasa ozi na-ewu ewu na ndị anaghị eri anụ, na ndị ọzọ.
Nke a bụ ihe atụ nke ụfọdụ nghọta anyị nwere ike ị nweta site na ị na-ege ntị na ntanetị. Ewepụtara nseta ihuenyo ahụ na ngwa ọrụ ị na-ege ntị na Awario. Ọ na atụmatụ echiche nyocha, ndakota nwoke na nwanyi nke ndi dere ya, obodo ebe ekwuru ya na Topic Cloud.
Ọ na-egosipụta isi isiokwu nke mkparịta ụka n'etiti ndị anaghị eri anụ. Dị ka ị pụrụ ịhụ, okwu ahụ ngwaahịa, yana ọdịiche dị iche iche nke ngwaahịa vegan (anụ, cheese, swiiti), a na-ekwu ọtụtụ ihe.
Onye na-ere ahịa ọdịnaya nwere ike nweta echiche ozugbo iji mepụta ndepụta nke ngwaahịa vegan kachasị mma - na anyị elebeghị anya na ederede nke ọ bụla ka anyị hụ isiokwu ndị mmadụ na-ekwu maka ya n'ụzọ zuru ezu. Ọ bụrụ na anyị gaa na Mentions feed iji lelee isiokwu na mgbasa ozi mgbasa ozi, anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ mmụọ nsọ maka ederede blọgụ, vidiyo, na mgbasa ozi mgbasa ozi!
Ugbu a, ka anyị chọọ maka mmiri ara ehi kwuru na data anyị nakọtara. Ebe ọ bụ na ọ bụ ekeresimesi, ọtụtụ mmadụ na-ekwu ụbọchị ezumike na tweets ha banyere mmiri ara ehi:
“Santa olee ka ọ ga-esi rie mmiri ara ehi na kuki ma ọ bụrụ na ọ na-ekwe ibe nọrọ lactose?”
"Kedu ụzọ kachasị mma isi kwadebe eggnog na-enweghị mmiri ara ehi?"
Ndị a niile bụ ezigbo ajụjụ ndị mmadụ nwere ma ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya iji zaa ha maka ntụrụndụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ.
2. Jiri Ntinye Aka Na-elekọta Mmadụ Iji Mata Tredị
O yighị ka ndị na-ege gị ntị ọ ga-anọ otu: ọdịmma na echiche ha na-agbanwe ka oge na-aga. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịgbaso usoro dị n'ime ụlọ ọrụ gị ma gbanwee ọdịnaya gị na mgbanwe ndị a.
Site n'enyemaka nke ige ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe gị, ị nwere ike nyochaa ụdị ọdịnaya na-aga nke ọma ma nweta mmụọ nsọ maka post nke gị.
iji Google na ọnọdụ na Trending taabụ na Twitter nwekwara ike inyere gị aka. Agbanyeghị, ige ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe gị na - enyere gị aka ileba anya na nlebara anya. Can nwere ike ịdọrọ niche gị ma ọ bụ ọbụlagodi mpaghara specificntanetị ma soro usoro dị n'etiti obodo ndị a kpọmkwem. I nwere ike ime ya site na nlekota oru-kpọmkwem okwu, nkebi ahịrịokwu, ma ọ bụ ọbụna aha.
Iji chọpụta usoro dị na ụlọ ọrụ gị, closeaa ntị nke ọma na ọnụọgụ ekwuru okwu gị. Ọ bụrụ n'ịhụ na ọnụọgụgụ na mberede na-arị elu, o nwere ike ịbụ na enwere ọhụụ ọhụrụ ịrị elu. Igwe ojii dị n’elu ma ọ bụ ígwé ojii okwu nwekwara ike inyere gị aka ịchọpụta ihe ndị dị na niche gị.
3. Jiri Ntị Na-elekọta Mmadụ Iji Mụta Ihe Site na Ndị Mmetụta
Ndị ndu na ndị ntụnye nwere ike ịduzi mkpebi azụmaahịa gị. Ndị na-emetụta ya na niche gị bụ akara ngosipụta nke ọdịnaya ndị na-ege gị ntị chọrọ ịhụ.
Kwesighi ịme ihe ọ bụla iji chọta ndị isi na ụlọ ọrụ gị. Advanced na-ege ntị na-elekọta mmadụ na-ege ntị na-egosi gị ndepụta nke akụkọ kachasị emetụta nke na-ekwu banyere isiokwu ndị ị chọrọ ịtụle. A na - ahazi ndepụta ahụ site na ndị na - ege ha ntị dịka ị ga - ahụ na nseta ihuenyo.
Ozugbo ị nwetara ndepụta ahụ, gaa na profaịlụ Instagram ha / ọwa Youtube / blog, ma lelee ụdị ọdịnaya ha biputere. Lezienụ anya ọ bụghị naanị n'isiokwu kamakwa àgwà onye ndu echiche. Gịnị bụ ihe oyiyi ha? O yiri ika gị ma ọ bụ na ọ dị iche?
Ọtụtụ mgbe ụzọ onye na-emetụta ihe na-adị na etu ha si akpa agwa na-ekere oke oke na arịrịọ ha. Attentiona ntị na ihe ndị a nwere ike inyere gị aka inyocha ọdịnaya nke gị - ọ bụrụ na olu ha na omume ha na-arụ ọrụ nke ọma karịa nke gị, ikekwe ị nwere ike ịgbanwe ọdịnaya gị ka ọ dabaa na mmasị ndị na-ege gị ntị.
I nwekwara ike ịtọ ntọala nlekota maka ụfọdụ ndị na-eme ihe nkiri na-ewu ewu na niche gị site na iji aha ha na mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka isiokwu. Nke a ga - enyere gị aka ịchọta nke blọọgụ ha na vidiyo ha ga - enweta nlebara anya karịa ogologo oge wee nye gị nghọta miri emi banyere atụmatụ ọdịnaya ha. Nghọta a nwere ike ime ka ọdịnaya gị dị mma.
Ndụmọdụ dị ọkụ: Lure ahịa azụmaahịa adighi na mpaghara ọrụ gị kama ị ka nwere ike ịbịaru ndị mmetụta dị ka njikwa ọdịnaya. Kpọọ ha ka ha rụkọta ọnụ na otu ọdịnaya ọnụ, ma ọ bụ nyefee nnabata ọdịnaya ha na ikpo okwu gị. Ọ bụrụ na ha bụ ọkachamara, enwere ike ịtụ aro ka gị na ha na-agba ajụjụ ọnụ. Mee ihe!
4. Jiri Nlekọta Nlekọta Na-enyocha Ndị Na-asọmpi Gị
Nyocha onye asọmpi bụ ụzọ kachasị mma iji hụ ihe usoro azụmaahịa na-arụ ọrụ n'ebughị oge ma ọ bụ ego na ịnwale. Ileba anya na ndị asọmpi gị na-enye gị ntụnye n'ụdị ụdị ọdịnaya na-adọta ndị na-ege gị ntị, ụdị ọdịnaya na-enweta oke mbak, yana ọdịnaya ọdịnaya.
Agbanyeghị, ezughị ezu ile anya naanị n'ihe ha na-ede na ntanetị ma detuo ya. Ọdịnaya gị achọghị ịdị mma, ọ kwesịrị ịdị mma karịa nke ha. Listening listeninga ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike inyere gị aka ịchọpụta ihe ntanetị, vidiyo, na mgbasa ozi mgbasa ozi nke kachasị na ndị na-enweghị ihe ịga nke ọma ma nyochaa ihe mere ha n'ụzọ dị otú a.
Ka anyị laghachi n’ihe atụ nke mmiri ara ehi anyị. Ileba anya na onye na-asọmpi gị nwere ike igosi gị na ọdịnaya ndị kachasị ewu ewu ha na-emepụta bụ usoro nri gụnyere mmiri ara ehi sitere na osisi. Agbanyeghị, ị hụrụ na ha anaghị eziga ha oge niile. N'otu oge ahụ, ha na-ezigara ọtụtụ isiokwu gbasara uru ahụike nke nri anụ ahụ - mana mgbe ị na-enyocha akara ha, ị chọpụta na isiokwu ndị a anaghị enweta oke mbak ma ọ bụ kpọtụrụ aha.
Ọ bụrụ na ị na-nanị anya ha ikenye usoro ị ga-eche “Hm, ma ọ bụrụ na ha na-mgbe niile ikenye ọrịa metụtara isiokwu, ndị a ga-abụ nnọọ ewu ewu na-ege ha ntị.” Ma na-elekọta mmadụ na-ege ntị na-egosi anyị na ọ bụghị n'ezie ikpe. Ma ị ga-abụ onye amamihe karịa inyocha akwụkwọ nhazi ha iji melite ọdịnaya gị.
Site na ozi a na aka gị, ịnwere ike iwulite usoro maka usoro ọdịnaya gị nke ọma.
5. Jiri Ntinye Egwuregwu Na-ege Ntị Iji Jiri Ọdịnaya Nke Emepụtara (UGC)
Enwere ụzọ dị mma iji mee ka ọdịnaya dị mkpa maka ndị na-ege gị ntị karịa iji ọdịnaya kere site ndị na-ege gị ntị? Ihe ndị mepụtara onye ọrụ abụghị naanị na ị na-enye ndị ahịa gị echiche kacha mma mana ọ na-ekwenyesikwa ike maka ndị ahịa. Ha nwere ike ịhụ na ndị mmadụ na-eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Dịka ọmụmaatụ, afọ a Twitter gwara ndị na-eso ụzọ ha ka ha gụọ 2020 na nzaghachi. Kemgbe afọ a tara akpụ, ya mere e nwere ọtụtụ ndị ọrụ afọ ofufo. Twitter gosipụtara nzaghachi na-atọ ọchị na oge Time Square na ezigbo oge. Ndị otu ahịa azụmaahịa Twitter ekwesịghị ide ahịrị - ọ bụ ndị ọrụ mepụtara ọdịnaya niile!
- Twitter (@Twitter) December 23, 2020
Enwere ike webata usoro mgbasa ozi mmekọrịta na ntanetị. Nwere ike ịga n'ihu karịa ma mee ka mgbasa ozi mgbasa ozi sitere na ndị ọrụ gị pụta ìhè nke post gị. Iji maa atụ, ị nwere ike ime blọgụ blọgụ emere kpamkpam site na ajụjụ a jụrụ maka ngwaahịa gị na soshal midia - ma zaa ha na post. Ma ọ bụ ihe nkiri a Q&A. Buzzfeed bụ otu n'ime ndị na-eme ihe na-aga nke ọma n'oge anyị, ọkara nke posts ha bụ naanị nchịkọta nke tweets na-atọ ọchị gburugburu otu isiokwu.
N'otu ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta ihe ọmụmụ gbasara ndị ahịa gị, na-akọ akụkọ ha - nke a bụ nhọrọ dị mma maka ụlọ ọrụ B2B.
Ihe ndị mepụtara site na onye ọrụ nwere uru etinyere n'ịtụkwasị ntụkwasị obi. O yikarịrị ka ndị mmadụ ga-ekwere ndị ahịa ibe ha dị ka ha. Ndị ị na-achọpụta ọdịnaya na njedebe na-eche na ị bara uru. Onye obula meriri!
Chọta ọdịnaya ndị ọrụ mepụtara dị mfe n'ihi na ịkwesighi ịdepụta mkpụrụokwu nwere ọgụgụ isi iji zube ọchụchọ gị - ị kwesịrị ịlele akara na ngwaahịa gị. N'ụzọ ahụ, ị ​​ga - enweta aha gị ọ bụla na mgbasa ozi na ntanetị, ọbụlagodi ndị na - anaghị akpọ gị aha.
Ntị na-elekọta mmadụ dị ezigbo mkpa
Ige ntị na ntanetị bụ ihe na-enye gị ohere ịmepụta ọdịnaya nke na-agwa onye ahịa gị okwu. Kama ịdabere na hunch na mmetụta gị, ngwa ndị na-ege ntị na-enye gị data siri ike nke na-egosi isiokwu ndị na-atọ ndị na-ege gị ntị ụtọ na ụdị ọdịnaya na-adọta ha.
Ọ dị ka igbe anwansi na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma iji mepụta ọdịnaya zuru oke - mana kama anwansi, ọ bụ nyocha data.
Debanye aha maka Awario n'efu
Tags: nyocha ndị na-ege ntịegwunyocha onye asọmpicontent Marketingesi achọta ọnọdụahịa ahịaegeechiche nyochana-elekọta mmadụ na-ege ntịọnọdụihe njirimara nke onye ọrụgịnị bụ mmadụ na-ege ntị
Mar 20, 2021 na 5: 42 PM
Daalụ maka nnukwu ndụmọdụ! Ahụrụ m ọtụtụ ndị nwere obere azụmaahịa na-ekepụta ọdịnaya gbasara ihe ọ bụla ọ dị ha ka enweghị ụdị usoro ọ bụla n'azụ ya, mgbe ahụ ha na-eche ihe kpatara na anaghị enweta nsonaazụ ha chọrọ. Enweghị m ike ikwenye karịa na ị kwesịrị ịge ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya kwesịrị ịbụ akụkụ nke usoro ọdịnaya ọ bụla, mana enwere ụzọ ziri ezi na ụzọ na-ezighi ezi iji mee ya.
Mar 25, 2021 na 6: 37 AM
Hey Alison, daalụ maka nzaghachi gị! Nke a bụ ezigbo ige ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe bụ akụkụ dị mkpa nke usoro ọdịnaya. Ke ibuotikọ ahụ, m na-akọrọ ndị ọzọ nke nnyocha nke ụzọ itinye. N'ezie, ụzọ ọ bụla ekwesịrị iji nlezianya chebara ya echiche.